ချစ်သူများနေ့မှာ အချစ်ကို ဘယ်လိုလက်ဆောင်တွေနဲ့ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စေမှာလဲ? - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 10, 2020 Pusadee Rojpalakorn, M.D.
“အစားအစာ ဝါးစားပါ” လို့ ငယ်ငယ်က စာထဲမှာ သင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ အစာကို ကြေကြေညက်ညက် ဝါးစားခြင်းအားဖြင့် ဗိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါ အစာချေလွယ်ပါတယ်။ အစာမှာပါတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို စုပ်ယူဖို့လည်း လွယ်ပါတယ်။ ခဏလေးနဲ့ ဗိုက်ဝတယ်လို့ ထင်စေတဲ့အတွက် ဝိတ်ချရာမှာလည်း အသုံးဝင် ပါတယ်။
တကယ်လို့ ညစာတွေဘာတွေ ချိန်းထားလို့ သောက်မယ်ဆိုရင် ဝိုင်နီကို သောက်ဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။ ဝိုင်နီ ချက်တဲ့ စပျစ်သီးရဲ့ အခွံမှာပါတဲ့ မယ်လတိုနင်ဓာတ်ဟာ ဆဲလ်တွေပျက်စီးခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဝိုင်နီဟာ အဲလ်ဇိုင်းမား နဲ့ ပါကင်ဆန်ရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ချေကိုတောင် လျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ဟာ ဆိုရင်ဖြင့် သိပ်လှတဲ့ နှင်းဆီပန်းစည်းကြီးတွေ၊ စားချင်စရာချောကလက်ဘူးတွေ ပလူပျံနေမယ့်နေ့ ဖြစ်တဲ့အပြင် ဒင်နာဒိတ်တွေနဲ့ အပြတ် ‘ရို’ ကြမယ့် ညနေခင်းတွေလည်း ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ အရမ်းကို ရိုမန့်တစ်ဖြစ်တဲ့ အစားအသောက်မီနူးလေးကို ရီဝေဝေအသောက်ကလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီး ချိုမြိန်တဲ့ အချိုအချဉ်လေးတွေနဲ့ လက်စသတ်လို့ ချစ်ရတဲ့သူနဲ့အတူ ဆင်နွှဲကြအုန်းမှာ မဟုတ်လား။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ အားလုံးစောင့်နေတဲ့ ဒီနေ့မှာ အထူးတလည်စီမံထားတဲ့ ဗင်လင်တိုင်းဒင်နာလေးကို ချစ်ချစ်နဲ့ အားရပါးရ တွယ်ပြီးတဲ့အခါ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ ဝိတ်တွေတက်လာပါပြီတို့၊ အစာမကျေလို့ ဗိုက်ထဲ မအီမသာဖြစ်နေတယ်တို့ စတဲ့ ကသိကအောက်ကိစ္စတွေတော့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဒါမျိုးတွေ မဖြစ်အောင် ဘာလက်ဆောင်တွေ လက်ခံရင်ကောင်းမလဲ။ ဘာတွေ သွားစားကြရင်ကောင်းမလဲ။ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးလေးမှာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ကင်းကင်းနဲ့ ရာနှုန်းပြည့် ပျော်နိုင်ကြမယ့်အပြင် ဝိတ်တွေ တက်ပြီး အင်္ကျီတွေ ကျပ်ကုန်တာမျိုးမဖြစ်ကြစေဖို့ ၁၄ ဖေဖော်ဝါရီအထိမ်းအမှတ် အကြံဉာဏ်ကောင်း ၁၄ မျိုးကို မေတ္တာလက်ဆောင် အဖြစ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ကိုယ့် ချစ်ချစ်တွေနဲ့ အတူတူ ဖတ်ကြဖို့ပါ။
၁. ချော့ကလက်ညိုဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းပါတယ်။
“နှင်းဆီပန်းနဲ့ ချော့ကလက်မပါ ဗင်လင်တိုင်းမဖြစ်” လို့ ဆိုရမှာပေါ့နော်။ အချိုတွေများတဲ့ နို့ချော့ကလက်တွေ ပေးမယ့်အစား ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတဲ့ dark chocolate လို့ခေါ်တဲ့ နို့မပါတဲ့ချော့ကလက်ညိုတွေ ပေးကြပါလား။ အရသာ ခါးသက်သက်လေးပေမယ့် အချစ်တွေ အများကြီးပါပါတယ် လို့။ စားပြီးရင် ထပ်တောင် တောင်းချင်နေ အုန်းမှာပါ။ ချော့ကလက်ညိုဟာ ကယ်လိုရီ နည်းတဲ့အပြင် အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဓာတ်လည်းပါလို့ စားလိုက်မယ်ဆိုရင် ဦးနှောက်မှာ ဆီရိုတိုနင်ဆိုတဲ့ ဓာတ်ကို ထုတ်ပေးပြီး အဲဒါက နွေးထွေးမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု စတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်တဲ့။ ဒါ့အပြင် ချော့ကလက်ညို စားပေးခြင်းအားဖြင့် ဒီမန်းရှားလို့ခေါ်တဲ့ မှတ်ဉာဏ်မေ့လျော့မှုကိုလည်း နည်းပါးစေတဲ့အတွက် ချစ်သူများနေ့မှာ ချော့ကလက်ညို စားထားရင် အသက်ကြီးတဲ့အထိ မမေ့တော့ဘူးပေါ့။ နှလုံးကျန်းမာရေးနဲ့ သွေးကြောစနစ်ကိုလည်း ကောင်းမွန်စေတာမို့လို့ ဒီအကြောင်းတွေကို ရှင်းပြရင်း ချောကလက်ညိုလေးတစ်တောင့် ကို အတူတူ ဝေမျှ စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
၂. အဆီနည်းတဲ့ ညနေစာ။
ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ရွေးသင့်တယ်။ အချိုလျှော့၊ အဆီလျှော့၊ အရသာကို ပိုပြင်းအောင် လုပ်တဲ့ အမှုန့်တွေ မထည့်နဲ့။ ငါးဟင်းကတော့ သင့်တော်တဲ့အထဲမှာ ပါပါတယ်။ ဆီထဲနှစ်ပြီး ကြော်ထား တာတွေ၊ နို့တို့ ထောပတ်တို့၊ ချိစ်တို့ အများကြီး ပါတဲ့ဟာတွေတော့ မစားသင့်ပါဘူး။ ဒင်နာကို ဆော့စ်ကောင်းကောင်းလေး ဆမ်းထားတဲ့ အရွက်သုပ်လေးနဲ့ စလိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား။ ပြီးတော့ ကြက်ကင်လေး ဒါမှမဟုတ် ဥပြုတ်လေး နောက်ကလိုက်တာပေါ့။ ဆီတွေအများကြီးနဲ့ သုပ်ထားတဲ့ အသုပ် တို့၊ ဟို အဆီတစ်ထပ်အသားတစ်ထပ် ဝက်ပေါင်ခြောက်တွေကို ပေါင်မုန့်ခြောက်တွေနဲ့ စားမယ့်အစားလေ။ အဲဒီနောက် အနီရောင်အသားဘာဘီကျူးတို့ ဖရန့်ချ်ဖရိုက်ဒ်အာလူးချောင်းကြော်တို့ စတာတွေကို ဆော့စ်တွေ ထဲမှာ နှစ်နှစ်ပြီးတော့ မစားဘဲ ငါး နဲ့ အသီးအရွက်ကင်လေးတွေကို အဝကြိတ်နိုင်ပါတယ်။ အစားအသောက် တွေထဲမှာ လှော်ထားတာ၊ ကင်ထားတာ၊ ဖုတ်ထားတာ၊ ပြုတ်ထားတာ၊ ပေါင်းထားတာ စတဲ့ အစားအစာ တွေဟာ ဆီထဲမှာ နှစ်ပြီး ကြော်ထားတဲ့ အစားအစာတွေထက် ပိုပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်တယ် ဆိုတာလည်း မမေ့ပါနဲ့လို့။ ဒါ့အပြင် ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်ကိုလည်း လျှော့ရပါမယ်။ မစားမဖြစ် စားရမယ်ဆိုရင် ဆန်လုံးညိုတို့၊ ဂျုံကြမ်းပေါင်မုန့်တို့၊ ဂျုံကြမ်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲတို့ စတာတွေ စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
၃. ဒင်ဒင်မစားခင် အစာအိမ်ထဲကို တစ်ခုခု ဖြည့်ထားပါ။
စားသောက်ဆိုင် မသွားခင် ကောင်းတာတစ်ခုခု အဆာပြေစားပေးထားခြင်းဖြင့် အဆာခံမှာဖြစ်ပြီး ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ ရောက်သွားလို့ မီနူးထဲ မြင်သမျှ အကုန်စားချင်တဲ့စိတ်တွေ ပေါက်လာတာမျိုးကို ကျော်လွှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစာအိမ်ထဲမှာ တစ်ခုခုရှိနေခြင်းဖြင့် အရက်ကလေး ဘာလေး သောက်တဲ့အခါ ခဏလေးနဲ့ မူး သွားတာမျိုး မဖြစ်ဘဲ ဟန်မပျက်ကလေး နေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ချစ်သူနဲ့ ဒိတ်တဲ့အခါ ကိုယ်က စမတ်ကျနေမှာပေါ့နော်။
အေးအေးဆေးဆေး သောက်ရင်း အစားအသောက်ကို အရသာခံပြီး ဖြည်းဖြည်းစားတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် အစားအစာကို ကြေကြေညက်ညက် ဖြစ်အောင် ဝါးစားခြင်းဖြင့် အစာကြေလွယ်တဲ့အပြင် အစာထဲမှာပါတဲ့ အာဟာရနဲ့ ဗီတာမင်ဓာတ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်က စုပ်ယူဖို့လည်း လွယ်ကူပါတယ်။ အစားအသောက်ကို ဖြည်းဖြည်းစားခြင်းဖြင့် ခဏလေးနဲ့ ဗိုက်ဝပြီဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ရရှိစေပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ “ဝပြီ” ဆိုတဲ့ အချက်ပြမှုကို ဦးနှောက်ဆီကိုပို့ဖို့ မိနစ် ၂၀ လောက် အချိန်ယူပါတယ်။ ခဏလေးနဲ့ ဗိုက်ဝပြီဆိုတော့ ဝိတ်ချနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။
၅. ဝိုင်နီလေးတစ်ခွက်လောက် မထည့်ချင်ဘူးလား။
ဆေးဆိုးထားတဲ့ သကြားရည်တွေဖြစ်တဲ့ အချိုရည်တွေသောက်မယ့်အစား ရေကိုပဲ သောက်ပါ။ အယ်လ်ကိုဟော ပါတာ သောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဝိုင်နီလေးတစ်ခွက်လောက် သောက်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဝိုင်နီ ချက်တဲ့ စပျစ်သီးရဲ့ အခွံမှာပါတဲ့ မယ်လတိုနင်ဓာတ်ဟာ ဆဲလ်တွေပျက်စီးခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဝိုင်နီဟာ အသက်ကြီးလာလို့ဖြစ်တဲ့ အဲလ်ဇိုင်းမား နဲ့ ပါကင်ဆန်ရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ချေကိုတောင် လျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရက်သောက်ခြင်းကြောင့်ရမယ့် ဆိုးကျိုးထက် အဆိုပါ ကောင်းကျိုးတွေက ပိုတဲ့အတွက် ဝိုင်နီလေးကို ၁ ခွက် ကနေ ၂ ခွက်လောက်အထိ သောက်ချင်ရင် သောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၆. အနီဆိုတာ အချစ်ရဲ့ အရောင်လား။
ဗယ်လင်တိုင်းဒေးရဲ့ သဘာဝက အနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချစ်ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ အနီရောင် အသည်းပုံလေးတွေအပြင် အနီရောင် အသီးအနှံတွေ၊ အနီရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက် အိမ်ချက်ကလေးတွေ ထည့်သွင်းပေးတာ ပိုပြီး ရိုမန်းတစ် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေမှာ အင်တီအောက်ဆီဒင့်တွေ ကြွယ်ဝတဲ့အတွက် ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့အပြင် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးတို့၊ ငရုတ်သီးတောင့်နီနီလေးတွေတို့ စတော်ဗယ်ရီ တို့ စတာတွေပေါ့။ ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒီ အသီးအနှံ တွေမှာပါတဲ့ အမျှင်ဓာတ်က ဝမ်းချုပ်မှုကနေ ကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင် အသားအရေကိုလည်း အရွယ်တင် နုပျိုစေပါတယ်။
၇. အငန်းလျှော့ (အဲလေ) အငန်လျှော့
ဆား စားတာများရင် နည်းနည်း အမ်းလာတတ်တယ်။ ဘယ်မိန်းကလေးမှ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးပြီး နောက်တစ်နေ့ မှာ မျက်နှာ မို့မို့အစ်အစ်ကြီး၊ ဗိုက်ကယ်ကယ်ကြီးနဲ့ အိပ်ရာ ထ မလာချင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဆား၊ အငန် နဲ့ ဆော့စ်တွေ အများကြီး စားတာကို လျှော့ရပါမယ်။ အငန်များများစားသုံးခြင်းဟာ ကျောက်ကပ် ကို ပိုပြီး အလုပ်လုပ်ရစေတဲ့အတွက် ကျောက်ကပ် ပျက်စီးမှုကိုလည်း အဖြစ်မြန်စေပါတယ်။ သွေးတိုး၊ နှလုံး နဲ့ လေဖြတ်ခြင်းတို့ဟာလည်း နောက်ကနေ လိုက်လာကြပါလိမ့်မယ်။
၈. မေးရမှာ မရှက်ပါနဲ့နော်
စားသောက်ဆိုင်မှာ စားဖိုမှူးကို ဟင်း ဘယ်လိုချက်သလဲ မေးရမှာ အားမနာပါနဲ့နော်။ အချိုလျှော့၊ ဆီလျှော့၊ အငန်လျှော့ စတာတွေ ပြောဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့။ ကျန်းမာတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံအတွင်းမှာ ရှိဖို့နဲ့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေး အတွက် အရေးကြီးတာမို့ စားပွဲထိုးကတစ်ဆင့် ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုချက်ပေးပါဆိုတာကို သေသေချာချာမှာကြားပါ။
၉. မျှဝေခြင်းဖြင့် မေတ္တာပြပါ
မျှဝေတယ်ဆိုတာ ကုန်ကျစရိတ်ကို တစ်ဝက်ခံခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကိုယ့်ပန်းကန်ထဲက အစားအစာကို တစ်ဝက်မျှကျွေးလိုက်ပါလို့ ဆိုလိုတာပါ။ တစ်ချို့ ဟင်းပွဲတွေက တစ်ယောက်ထဲ ဘယ်ကုန်ပါ့မလဲ။ တစ်ပွဲမှာပြီး နှစ်ယောက်အတူတူ စားကြခြင်းအားဖြင့်လည်း ရို လို့ ရတာပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ စားသောက်ဆိုင်မှာ စားလို့ မကုန်ဘူးဆိုရင် အိမ်မှာစားဖို့ ပါဆယ်ယူတာပဲ။ ဒါလဲ မျှစားခြင်းတစ်မျိုးပဲလေ။ မိသားစုနဲ့ မျှဝေစားသုံးတာပေါ့။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ အိမ် တန်းမပြန်ဘူး၊ ၂ နာရီလောက်ကြာမှ အိမ်ရောက်မယ် ဆိုရင်တော့ ပါဆယ် မဆွဲသင့်ပါဘူး။ အေးသွားရင် ဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ပွားတော့မယ်လေ။ အဲဒါတွေစားရင် ဗိုက်နာပြီး ဝမ်းလျှောလိမ့်မယ်။
၁၀. တကယ့်နေ့ မို့ ဟဲဗီး စားရမှာလား
ဗယ်လင်တိုင်းဒေးဟာ ချစ်သူတို့အတွက်နေ့ထူးနေ့မြတ်ကိုး။ ဒါကြောင့်အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ ရှယ် တွယ်လိုက်မဟဲ့ လို့ ဟဲဗီးတွေ လျှောက်မှာဖို့တော့ မသင့်ပါဘူး။ မကုန်နိုင်အောင် လျှောက်မှာပြီး ကုန်အောင်စားခြင်းဖြင့် နောက်နေ့ကျရင် အင်္ကျီက ချုပ်ရိုးသီစာတွေ ပြန်ဖြည်နေရလိမ့်မယ်။
၁၁. ညစာစားပြီးရင် လမ်းလေးတစ်ပတ်လျှောက်ကြမယ်နော်
အချစ်နဲ့အတူ ညစာစားပြီးရင် လမ်းလေးတစ်ပတ်လောက် ထွက်လျှောက်ကြမယ်လေ နော်။ (အယ့်လယ်) လမ်းလျှောက်ရင်း တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ပြောကြမယ်။ အလုပ်ထဲကအကြောင်းတွေ အတင်းတုတ်ကြမယ်၊ ရှေ့ရေးတွေ ဆွေးနွေးကြမယ်၊ ဒါတွေက ဗယ်လင်တိုင်းဒေးရဲ့ အသက်ပဲ။ အတူတူ လမ်းလျှောက်ခဲ့စဉ်ခဏလေးတွေဟာ နောက်တစ်ချိန်မှာ အမှတ်တရလေးတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးတွေအကြောင်းလည်း စားမြုံ့ပြန်လို့ ရတာပေါ့။ ဒါ့အပြင် အစာလည်းကြေပြီး ကယ်လိုရီ တွေကိုလည်း လောင်ကျွမ်းပစ်လိုက်နိုင်တယ်လေ။ လျှောက်ရမယ့်လမ်းကိုတော့ သေသေချာချာ ရွေးစေချင် ပါတယ်။ ယာဉ်အန္တရာယ်တို့ဘာတို့ နဲ့ တခြား ဘေးကင်းပြီး သာယာတဲ့ လမ်းကလေးမှာ အတူတူ လျှောက်ကြ မယ်ပေါ့။
၁၂. အိမ်ချက်ကလေးပဲ ကောင်းပါတယ်
ဗယ်လင်တိုင်းဒေးဟာ ကိုယ့် အချက်အပြုတ်စွမ်းရည်ကို ပြသခွင့်ရတဲ့ နေ့တစ်နေ့လည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ ဆိုင်မှာ သွားစားမယ့်အစား ဈေးအတူတူဝယ်ပြီးတော့ အိမ်မှာ ချက်စားကြပါလား။ အတူတူချက်ရင်းလဲ ရို လို့ရတယ် လေ။ တစ်ယောက်အကြိုက်လည်း တစ်ယောက် သိသွားမယ်။ ပိုက်ဆံလည်းအကုန်သက်သာမယ်။ အတူရှိချိန် လေးတွေကိုလည်း တန်ဖိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်မယ်။ ကိုယ်က တကယ် ချက်တတ်ပြုတ်တတ်မယ်ဆိုရင် ဟင်းပွဲ အသစ်တွေဘာတွေတောင် အမှတ်တရ ထွင်နိုင်သေးတယ်။ ဒါတွေနဲ့ အချစ်တွေ တိုးစေနိုင်တဲ့အပြင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လဲ နားလည်မှုတွေ ပိုလာစေနိုင်ပါတယ်။ အတူတူဖန်တီးထားတဲ့ အရာသာရှိ ဟင်းပွဲလေးတွေကို အတူတူစားရင်း ဗယ်လင်တိုင်းဒေးကို ကုန်ဆုံးစေကြမယ် ပေါ့။
ဗယ်လင်တိုင်းဒေးပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရယ်ရယ်မောမော နေပါလို့ အကြံပြုချင် ပါတယ်။ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း မဖြစ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မှာလိုက်တဲ့ဟင်း စားလို့မကောင်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စူပုပ်ပြီး ကောက် နေတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ အေးဆေးပေါ့။ စားလို့မကောင်းလည်း အချိုပွဲလေး မှာစားပြီး ဗိုက်ဖြည့်လိုက်တာပေါ့။ ပြီးတော့ ရီစရာလေးဘာလေးပြောပြီး စိတ်လက်ပေါ့ပါးအောင် လုပ်ပစ်လိုက်ပေါ့။ သင့်တင့်တဲ့အာဟာရရယ်၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းရယ်၊ ရယ်မောခြင်းရယ် တို့ကို ပေါင်းစပ်လိုက်တာဟာ ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးတစ်ခွက် ပဲ မဟုတ်လား။
၁၄. အပြင်ထွက်စားမယ့်အစား တခြားဟာ တစ်ခုခု လုပ်ကြမလား။
ဗယ်လင်တိုင်းဒေးမှာ နှစ်ယောက်အတူတူ ရှိနေဖို့က အရေးကြီးဆုံးပဲမဟုတ်ဘူးလား။ ဒင်နာသွားစားမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတို့၊ လိုက်ဖ်ရှိုးသွားတာတို့၊ စက်ဘီးအတူတူစီးတာတို့၊ တောင်ပေါ်တက်တာတို့ ဘာတို့ စတဲ့ နှစ်ယောက် ဝါသနာတူတာတွေကို အတူတူ လုပ်တာလဲ ကောင်းတာပါပဲ။ အလုပ်တစ်ခုကို နှစ်ယောက်အတူလုပ်ခြင်းအားဖြင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုတွေ ပိုလာနိုင်သလို ဈေးကြီးပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူမဖြစ်တဲ့ အစားအစာတွေ မစားခြင်းအားဖြင့်လည်း ငွေကုန်ကြေးကျ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
အဲဒီတော့ “ဗယ်လင်တိုင်းဒေးကျရင်…” ဆိုတဲ့ အတွေးတွေအတွက် ကျန်းမာရေးကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားစေလိုပါတယ်။ ဗယ်လင်တိုင်းဒင်နာမှာ ဟဲဗီးတွေ စားမထားမှသာ နောက်နေ့မနက် အိပ်ရာကနေ ကျန်းမာရွှင်လန်းစွာ နိုးထလာနိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုလို့ တအားကြီး တင်းကျပ်ပြီး အသေးစိတ်ကလေး တွေကအစ လိုက်ဂရုစိုက်နေဖို့တော့လည်း မလိုပါဘူး။ ဗယ်လင်တိုင်း ဆိုတာ ချစ်သူနှစ်ဦး ပျော်ရွှင်ကြည်နူး ဖို့လည်း လိုသေးတာမို့ အဲဒါကို ထိခိုက်လို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးဆိုတာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေနဲ့ ထုပ်ပိုးထားပြီး အချစ်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပဲ မဟုတ်လား။ ချစ်သူတွေ ပြုံးနေဖို့နဲ့ ရယ်မောနေဖို့ဆိုတာ ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးအနှစ်သာရကိုရဖို့ လူတွေ သိပ်မသိကြသေးတဲ့ သော့ချက်တွေပဲ မဟုတ်ဘူးလား။
ဆရာဝန်များနဲ့ရက်ချိန်းဘိုကင်တင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ကို အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းလိုခြင်းများပြုလုပ်လိုပါက Facebook messenger သို့အကြောင်းကြားထားနိုင်ပါတယ်။
ချစ်သူများနေ့မှာ အချစ်ကို ဘယ်လိုလက်ဆောင်တွေနဲ့ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စေမှာလဲ? နှင်းဆီပန်းနဲ့ ချော့ကလက်မပါ ဗင်လင်တိုင်းမဖြစ်” လို့ ဆိုရမှာပေါ့နော်။ အချိုတွေများတဲ့ နို့ချော့ကလက်တွေ ပေးမယ့်အစား ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတဲ့
User rating: 3.43 out of5with7ratings